Dubai - Dhammaan Waxyaabaha Large iyo Yar-yar ee Wendy Louise Nog ee UAE
Aniga iyo gabadhayda yar waxaan fadhinnay hoyga banaanka ah goob maqaaxi ah oo albaabkeedu uu ku yaal lagu dubay macmacaan iyo nadaafadda midab kasta oo qaanso roobaadka dhex socda oo eegaya barkadda xasilloonida ee xagga hoose. Hoos ka daawo Waxaan ku jirnay heerka toddobaad ee kafateeriyada safka geeska ah ee Mall Dubai. Iyo intii aan fariisnay oo aan ku neefsanayno hawada, oo aan la yaabnay waxoogaa yar yar oo liin ah oo ay duufaano aad u fog ay siinayso dhismayaasha ku xeeran. Markii ugu horreysay laba toddobaad gudahood, Waxaan dareemaynay degenaansho.
Safarkayaga ka socda California ee lagu booqanayo qoyska ku yaal magaalada Kolkata ayaa lagu ciqaabay diidmo xad dhaaf ah oo aad la kulanto markii aan u safrayay meel kasta oo Hindiya ah, oo aannu soo galnay Dubai si cadaalad ah u ruxay. Ahaanshaha qof dumar ah oo kelidii la safreysa gabadh yar ayaa lahayd ubaahan feejignaan diiradda saaraya oo daallan. Waxaan aad ugu faraxnay inaan soo dagnay Dubai, dabcan, waxaan aragnay Burj Kalifa sidii aan degnay.
Waxaan ka soo qaadnay tareen nadiif ah oo nadiif ah Garoonka diyaaradaha Dubai, laga saaray joogsiga tareenka weyn. Oo waxaan ku socday jidadka aan dhammaadka lahayn ee waddooyinka mara ilaa ugu dambeyntii aan gaarnay meeshii aan u dhaqaaqnay waxaanan helnay makhaayad aan ku fariisan karno, ku degganaan karno, oo aan ku qaadan karno deegaankan cusub. Sidii ayaan qorraxda u fadhiisan jirnay dhegeysiga muusikada ambient ee nagu xeeran. Waxaan dareemay dhammaan walwallada, walaaca safarka, walaacyada ku saabsan wax kasta, gabi ahaanba waa iga dhalaashay. Waxaan halkaas la fariisannay annaga oo yaaban, oo isla wada sheekaysanna Dareenkaas oo kaliya lagu arki karo Dubai.
Dubai waxay ku soo noqotay meel dalxiis oo cajiib ah!
Ujeedadayda booqashada magaaladan cajiibka ah waxay ahayd inaan la xiriiro macmiilkeyga naqshadeynta websaydhka, Caanka ah Persian Chef Ariana Bundy, oo furaya makhaayad Faarisi ah, “Ariana's Persian Kitchen” ee Hotel-ka Royalisis & Degmooyinka la yaabka leh. Cunnadeeda Faarisiinta ah ayaa lagu dallacsiiyay ubax, saffron, pistachios, waxaana ka muuqan doona liis la yaab leh oo ku saabsan cuntada sida loo sameeyo. Waxay sidoo kale cusbooneysiineysaa guri xNUMX sano jir ah a Meel u gaar ah oo loogu adeego sidii dugsi karinta iyo meesha loo tago.
Sheekadeeda waa mid taas oo ka tarjumeysa sheekada Dubai. Waxaa a meel Meeshaad ku riyooneyd, oo aad riyadaas ka rumowatid. Waa garoon loogu talagalay naqshadeeyeyaasha iyo soo-saareyaasha, chefs iyo naqshadeeyayaasha, farshaxannada iyo socdaallada, iyo gabi ahaanba wax kasta oo aad qiyaasi karto inay suurogal tahay, oo ay ka mid tahay abuurista khariidad adduunka oo jasiirado ah. Mustaqbalka Bright ayaa sharaf weyn u ah in ay ku weheliso safarkan, iyo iyada oo ah hay'ad naqshadeysa websaydhada ku takhasusay cuntada, Tani waxay ahayd booqasho qaas ah oo aad u cajiib badan.
Waxaan awoodnay inaan si fudud u qaadano Uber meel kasta, iyo darawal kasta oo aan haysano wuxuu ahaa mid naxariis badan, saaxiibtinimo leh, oo u furfuran si aan u wadaagno asalkiisa iyo qoyskooda. Waxaan sidoo kale dareemeynay nabadgelyo buuxda. Sida dadka daggan Dubai badankood darawalada dhamaantood waxay ka yimaadeen meel kale, taas oo aad ugu eg deegaankayaga California.
Marti noo sharaf leh ayaa na siisay safar ku aaddan Aagga aan ku suganahay, iyo waxay ahayd mid si fudud maskax ahaan u boodday inay si lama filaan ah ugu soo degto mid kale oo haddana cluster kale oo ah dabaqyada 100. The dhismayaasha dhismayaasha cusubi meel kasta way ka dhacayeen, waana wax lagu farxo in la arko oo la maleeyo sida ay ahaan doonaan markii ay dhammeeyaan iyadoo lagu saleynayo xaglaha aan macquul aheyn ee u muuqday inay ka soo baxayaan burooyin hoose.
Diner oo ku yaala xaflad shan sano ah
Waxaan casho ku wada qaadanay Jumeirah Al Qasr, dalxiis shan-xiddigle ah, oo ku fadhiyey qol firaaqe ah oo ka eegaya kanaalada kanaalka geedaha timireed. Qaab dhismeedka oo dhan wuxuu ka kooban yahay geedo quruxsan iyo alwaax qurux badan. Cunnadu waxay ahayd mid cajiib badan oo dhadhan leh, iyo khamrigu gebi ahaanba lama yaqaan, kaas oo walwal iyo cajiib waqti isku mid ah.
Mustaqbalka mustaqbalku World Expo waa in lagu qabtaa magaalada Dubai ee 2020, dhismuhu mar hore ayuu bilaabmay, iyadoo ay dalalku dhiseen wakiillo yaab leh oo ku saabsan dhismahooda ugu hal abuurka badan. Waxaa jirraba in la qoro dhammaan faahfaahinta waqtigeenna qaatay sahaminta magaalada cajiibka ah ee Dubai, laakiin waa wax aad u xiiso badan in la ogaado naftaada. Xaqiiqdii waan soo noqonaynaa, oo ma sugi karno kareemka jalaatada leh ee dhadhanka leh Ariana's maqaayad iska indha tirayasa cusbada cusbada ee biyaha gacanka Faaris.
Isku-xirka Ariana ee Website-yada ku jira:
Wendy Louise Nog Aasaasaha, Qaabdhismeedka xalinta, Future BrightPhone: 415-275-0970
Cinwaanka: 100 Shilalka Wadada, Dhismaha B, Suite 100
Shirkadda Dubai City waxay hadda siisaa hagis iyo macluumaad wanaagsan Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, hadda waad heli kartaa hagayaal, talooyin iyo shaqaalaynta Imaaraadka Carabta Emirates oo leh luqaddaada.